UMason Jar Cabin I-Rustic iphuma entabeni
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguKristie
Ikhabhathi entsha eyakhiwe ngo-2019 entliziyweni yepocahontas County! Umgama nje oziikhilomitha ezingama-28 ukuya e-Snowshoe ski resort. Inegumbi lokulala elisezantsi elinebhedi yokumkanikazi, igumbi lokulala eliphezulu linebhedi epheleleyo eneloft evulekileyo ejonge ekhitshini kunye negumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela elisezantsi elineshawa yokuma. Inempompo yobushushu, iCable tv, kunye neWIFI ikwanekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Sinendawo yokucima umlilo ngaphandle eneenkuni ezithengiswayo esizeni. Umkhondo womlambo we-greenbrier oziikhilomitha ezingama-77 uphambi kwendlwana yethu.
I-Cabin ineveranda entle yokuhlala kwaye uphumle kuyo, iyadi encinci, indawo yomlilo kunye ne-gas grill, iintyatyambo ezininzi.
Sihamba umgama oya kwiindawo zokutyela, ivenkile, umlambo waseKnapp, umlambo iGreenbrier kunye nendlela yebhayisekile yomlambo iGreenbrier iphambi kweKhabhin. Idolophu yasePocahontas ibonelela ngeyona ndawo ibalaseleyo yokuloba iitrout kwilizwe! Sinokuhamba intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela inqanawa kunye nokuhamba ngephenyane. Sizimayile nje ezingama-28 ukusuka eSnowshoe Ski Resort, kunye neemayile ezingama-29 ukusuka eCass Scenic Railroad State Park, ikwakufutshane nezinye iindawo ezinomtsalane ezidumileyo kwidolophu!
Injongo yethu kukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kwaye kukhululeke kangangoko sinakho. Sishiyekile yimizuzu nje embalwa, kwaye siya kukunceda nangayiphi na indlela, sikunike ulwazi okanye sicwangcise naluphi na uhambo lwakho ngexesha lokuhlala kwakho.
Injongo yethu kukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kwaye kukhululeke kangangoko sinakho. Sishiyekile yimizuzu nje embalwa, kwaye siya kukunceda nangayiphi na indlela, sikunike ulwa…